Valentine’s Day မှာ ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် ဒိတ်လုပ်ချင်ကြတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက်
7 Feb 2018 . 3:25 PM
လာမယ့် Feb 14 ကျရင် စုံတွဲတွေအတွက် ပျော်စရာနေ့ရက်လေးဖြစ်တဲ့ Valentine’s Day လည်းရောက်လာတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် စုံတွဲကိုယ်စီ အဲနေ့မှာ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ဘာလက်ဆောင်တွေပေးရမလဲ? ချစ်ရသူနဲ့တစ်နေ့တာကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမလဲဆိုပြီး Plan တွေကို တိုင်ပင်နေကြပြီထင်ပါတယ်။ ချစ်သူကို လက်ဆောင်ပေးတာတို့ Surprise လုပ်တာတို့က နှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကျဆိုတော့ ဒီတစ်နှစ်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား အမှတ်တရဖြစ်တာမျိုးတွေ ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ မထင်ဘူးလား။ ဒီတော့… Valentine’s Day နေ့လေးမှာ ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်တဲ့ အမှတ်တရမျိုးလေး ဖန်တီးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုဖော်ပြပေးမယ့် Romantic ဆန်ဆန် V’s Day ဒိတ်အိုင်ဒီယာလေးတွေထဲက ကြိုက်နှစ်သက်တာကို ရွေးချယ်ထားလိုက်တော့နော်။
(၁) အတူတကွ ချက်ပြုတ်စားသောက်ပါ
နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်တွေသွားပြီး ဒင်နာဒိတ်လုပ်မနေဘဲ အိမ်မှာအတူတကွ ချက်ပြုတ်စားသောက်ကြည့်ပါ။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နွေးထွေးမှုကို ပိုမိုခံစားရစေပြီးတော့ တကယ့်ကို ကြည်နူးစရာအတိပါပဲ။ အခုလို လက်တွဲဖော်နဲ့ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ စားစရာတစ်ခုခု တူတူချက်ပြုတ်တာကလည်း ဘယ်တော့မှ မေ့မရတဲ့ အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်စေမှာပါ။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ရဲ့ ဟင်းချက်လက်ရာကိုလည်း တိုးတက်စေတာပေါ့နော်။
ဒီလိုနေ့ရက်မျိုးမှာ တချို့စုံတွဲတွေကလည်း ခရီးထွက်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကမ်းခြေလိုနေရာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီတော့ သူများနဲ့လည်းမတူရလေအောင် တောတောင်လို တစ်နေရာရာကို ခရီးထွက်လိုက်ပါ။ Trekking သဘောမျိုးပေါ့။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့တူနဲ့ ခရီးတူတူထွက်တာဟာ စွန့်စားခန်းထွက်ရသလိုပါပဲ။ ဒီလိုခရီးတူတူထွက်တဲ့အခါမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး လိုအပ်မှုတွေကို ဖေးမကူညီတတ်လာပြီးတော့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိပြီး ပိုနားလည်ပေးနိုင်စွမ်း ရှိလာပါလိမ့်မယ်။
(၃) Valentine’s Day ပါတီမှာ စုံတွဲအက ကပါ
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ တူတူတွဲကတာကလည်း ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အကဝါသနာပါတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက်တော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ Valentine’s Day ပါတီပွဲမှာ ချစ်သူနဲ့ တူတူတွဲကလိုက်ပါ။ သီချင်းအေးအေးလေးဖွင့်ပြီး စုံတွဲက ကမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် Romantic ဆန်လိုက်မလဲ။ စိတ်ကူးနဲ့တောင် ကြည်နူးဖို့ကောင်းနေပါပြီနော်။
(၄) နာမည်စာလုံးထိုးထားတဲ့ လက်ဝတ်ရတနာပြုလုပ်ပါ
ကိုယ်ချစ်သူကို လည်ဆွဲတွေ လက်စွပ်တွေ စပရိုက်စ်ဆိုပြီး လက်ဆောင်ဝယ်ပေးမဲ့အစား လက်ဝတ်ရတနာတွေထုတ်လုပ်တဲ့ အလုပ်ရုံးတစ်ခုခုကို ခေါ်သွားလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ လက်ဝတ်ရတနာတစ်ခုခုကို ဆင်တူလုပ်ခိုင်းပါ။ လက်ကောက်ဆိုရင်လည်း လက်ကောက်မှာ နာမည်စာလုံးလေး ထိုးခိုင်းလိုက်ပါ။ ဘယ်လောက် Romantic ဆန်လိုက်သလဲ။
ချစ်သူကိုယ်စီတိုင်း Feb14 ရက်နေ့ရာက်ပြီဆိုရင် ချောကလက်တွေဝယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးကြပါတယ်။ ဆိုင်ကဝယ်ပြီးပေးတာဆိုတော့ သိပ်ပြီး Romantic မဆန်သလိုပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ချောကလက်ပြုလုပ်နည်းကိုလေ့လာထားပြီး ချစ်ရသူနဲ့ အတူတကွ ပြုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ချောကလက်ကိတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ ချောကလက်တုံးလေဖြစ်ဖြစ် ဖန်တီးလိုက်ပါ။
ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ကောင်းမှုကုသိုလ်အတူတကွ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ပရဟိတပြုလုပ်ပါ။ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ နှစ်ယောက်တူတူ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်တာက သူများတွေထက် ပိုပြီးတော့ စိတ်ချမ်းမြေ့မှု၊ ကြည်နူးမှုကို အပြည့်အဝရရှိစေပါတယ်။
Valentine’s Day မှာ ရိုမနျတဈဆနျဆနျ ဒိတျလုပျခငျြကွတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲတှအေတှကျ
လာမယျ့ Feb 14 ကရြငျ စုံတှဲတှအေတှကျ ပြျောစရာနရေ့ကျလေးဖွဈတဲ့ Valentine’s Day လညျးရောကျလာတော့မှာပါ။ ဒါကွောငျ့ စုံတှဲကိုယျစီ အဲနမှေ့ာ ဘာတှလေုပျရမလဲ ဘာလကျဆောငျတှပေေးရမလဲ? ခဈြရသူနဲ့တဈနတေ့ာကို ဘယျလိုဖွတျသနျးရမလဲဆိုပွီး Plan တှကေို တိုငျပငျနကွေပွီထငျပါတယျ။ ခဈြသူကို လကျဆောငျပေးတာတို့ Surprise လုပျတာတို့က နှဈစဉျပွုလုပျနကေဆြိုတော့ ဒီတဈနှဈမှာတော့ ထူးထူးခွားခွား အမှတျတရဖွဈတာမြိုးတှေ ပွုလုပျသငျ့တယျလို့ မထငျဘူးလား။ ဒီတော့… Valentine’s Day နလေ့ေးမှာ ဘယျတော့မှ မမနေို့ငျတဲ့ အမှတျတရမြိုးလေး ဖနျတီးခငျြတယျဆိုရငျတော့ အခုဖျောပွပေးမယျ့ Romantic ဆနျဆနျ V’s Day ဒိတျအိုငျဒီယာလေးတှထေဲက ကွိုကျနှဈသကျတာကို ရှေးခယျြထားလိုကျတော့နျော။
(၁) အတူတကှ ခကျြပွုတျစားသောကျပါ
နာမညျကွီးစားသောကျဆိုငျတှသှေားပွီး ဒငျနာဒိတျလုပျမနဘေဲ အိမျမှာအတူတကှ ခကျြပွုတျစားသောကျကွညျ့ပါ။ တဈဦးနဲ့တဈဦး နှေးထှေးမှုကို ပိုမိုခံစားရစပွေီးတော့ တကယျ့ကို ကွညျနူးစရာအတိပါပဲ။ အခုလို လကျတှဲဖျောနဲ့ မီးဖိုခြောငျထဲမှာ စားစရာတဈခုခု တူတူခကျြပွုတျတာကလညျး ဘယျတော့မှ မမေ့ရတဲ့ အမှတျတရတဈခုဖွဈစမှောပါ။ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောရဲ့ ဟငျးခကျြလကျရာကိုလညျး တိုးတကျစတောပေါ့နျော။
ဒီလိုနရေ့ကျမြိုးမှာ တခြို့စုံတှဲတှကေလညျး ခရီးထှကျကွတာကို တှရေ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကမျးခွလေိုနရောမြိုးတှပေေါ့။ ဒီတော့ သူမြားနဲ့လညျးမတူရလအေောငျ တောတောငျလို တဈနရောရာကို ခရီးထှကျလိုကျပါ။ Trekking သဘောမြိုးပေါ့။ ကိုယျခဈြရတဲ့တူနဲ့ ခရီးတူတူထှကျတာဟာ စှနျ့စားခနျးထှကျရသလိုပါပဲ။ ဒီလိုခရီးတူတူထှကျတဲ့အခါမှာ တဈဦးနဲ့တဈဦး လိုအပျမှုတှကေို ဖေးမကူညီတတျလာပွီးတော့ တဈယောကျအကွောငျး တဈယောကျသိပွီး ပိုနားလညျပေးနိုငျစှမျး ရှိလာပါလိမျ့မယျ။
(၃) Valentine’s Day ပါတီမှာ စုံတှဲအက ကပါ
ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ တူတူတှဲကတာကလညျး ပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ အကဝါသနာပါတဲ့ ခဈြသူစုံတှဲတှအေတှကျတော့ ပိုအဆငျပွတောပေါ့နျော။ Valentine’s Day ပါတီပှဲမှာ ခဈြသူနဲ့ တူတူတှဲကလိုကျပါ။ သီခငျြးအေးအေးလေးဖှငျ့ပွီး စုံတှဲက ကမယျဆိုရငျ ဘယျလောကျ Romantic ဆနျလိုကျမလဲ။ စိတျကူးနဲ့တောငျ ကွညျနူးဖို့ကောငျးနပေါပွီနျော။
(၄) နာမညျစာလုံးထိုးထားတဲ့ လကျဝတျရတနာပွုလုပျပါ
ကိုယျခဈြသူကို လညျဆှဲတှေ လကျစှပျတှေ စပရိုကျဈဆိုပွီး လကျဆောငျဝယျပေးမဲ့အစား လကျဝတျရတနာတှထေုတျလုပျတဲ့ အလုပျရုံးတဈခုခုကို ချေါသှားလိုကျပါ။ ပွီးတော့ လကျဝတျရတနာတဈခုခုကို ဆငျတူလုပျခိုငျးပါ။ လကျကောကျဆိုရငျလညျး လကျကောကျမှာ နာမညျစာလုံးလေး ထိုးခိုငျးလိုကျပါ။ ဘယျလောကျ Romantic ဆနျလိုကျသလဲ။
ခဈြသူကိုယျစီတိုငျး Feb14 ရကျနရေ့ာကျပွီဆိုရငျ ခြောကလကျတှဝေယျပွီး လကျဆောငျပေးကွပါတယျ။ ဆိုငျကဝယျပွီးပေးတာဆိုတော့ သိပျပွီး Romantic မဆနျသလိုပဲ။ ဒါ့ကွောငျ့ ခြောကလကျပွုလုပျနညျးကိုလလေ့ာထားပွီး ခဈြရသူနဲ့ အတူတကှ ပွုလုပျကွညျ့လိုကျပါ။ ခြောကလကျကိတျဖွဈဖွဈ၊ ခြောကလကျတုံးလဖွေဈဖွဈ ဖနျတီးလိုကျပါ။
ဒီလိုနမြေို့းမှာ ကောငျးမှုကုသိုလျအတူတကှ ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ ဘုနျးကွီးကြောငျးပဲဖွဈဖွဈ အကူအညီလိုအပျနတေဲ့ နရောတှမှော ပရဟိတပွုလုပျပါ။ ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့ နှဈယောကျတူတူ ကောငျးမှုကုသိုလျပွုလုပျတာက သူမြားတှထေကျ ပိုပွီးတော့ စိတျခမျြးမွမှေု့၊ ကွညျနူးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိစပေါတယျ။